The Zimbabwean - Page 5423 of 5563 -A voice for the Voiceless
The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) yesterday held an engagement meeting with stakeholders about the delimitation set to start as soon as the results of last month’s population census start flowing in.
Zimbabweans are very united – hating a regime that impoverishes us doesn’t mean we’re divided!
I always find statements by Zimbabwe’s ruling establishment, urging us to be united, quite mind-boggling – since, as far as I can tell, Zimbabweans are some of the most united people on a continent riddled with conflicts induced by divisions and hatred, usually fueled by tribal, religious, and political differences.
Never-before-seen photos reveal extraordinary wedge-shaped impressions and oval imprints left in a grass field by UFOs
During afamous 1994 sighting witnessed by more than 60 schoolchildren in Zimbabwe
Corruption fuels poverty
HARARE - This week the UN celebrated its annual "Day for the Eradication of Poverty". No doubt they held a lavish reception in New York and...
AIDS and poverty stalk Zimbabwe schools
Once they achieved spectacular goals - but are now a shadow of their former selves.
BULAWAYO - The government's spy Central Intelligence Organisation (CIO) believes Zimbabweans are readier than ever before...
Massive arrests in Bulawayo
BULAWAYO - There have been many arrests in Bulawayo - virtually every major wholesaler
and retailer has...
Travel and Tourism: The River
Chirundu's border post has become a hive of activity with agricultural exports from Zambia and imports...
At war with the elephants
GOKWE - Precious Nyoni, 35, surveys his garden. The vegetable and sugarcane stalks are flattened, and...
OUT OF AFRICA, OUT OF ZIMBABWE
Part two: A Sad Farewell
BY MIKE ROOK
The morning of March 18 was cold, with a thick...
Jail awaits Jono
HARARE - Moeletsi Mbeki, younger brother of President Thabo Mbeki, and Witwatersrand University (Wits) have separately...
Mugabe buys loyalty
HARARE - Government has raised salaries of military personnel - the front-line enforcers of...
HARARE - Zimbabwe's main opposition, the MDC, has scoffed at government's "double standards" in renaming hundreds...
Costly foreign education for Ministers’ kids while Zim kids sent home
HARARE - Zimbabwe's cabinet ministers could be fleecing the treasury of millions of dollars...
Deported Zims living in Malawi squalor
BLANTYRE - Thousands of Zimbabweans are reported to be living in squalor near Chileka...
Body of Rwandan genocidaire found in Zimbabwe